I-china A2FE160 180 piston pump izingxenye ezisele izingxenye ze-Big Bearing T7FC070 abahlinzeki kanye nefektri | Amandla Endlovu
Umfutholuketshezi oqondisa Valve
Amayunithi we-Hydraulic Orbitrol Steering
Izingxenye ze-Hydraulic Piston Pump Spare
Umfutholuketshezi Vane Pump Futhi Izingxenye elingasebenzi
Izingxenye ze-Rexroth Pump
6E6474 umfutholuketshezi Pump Buyisela Igobolondo ngoba Wheel Lo ...
Cat OEM futha piston futha izingxenye ezisele 9T chungechunge
1P40 eqondisa valve UKULAWULA valve 1SPOOL
F-201346 ukuthwala okukhulu kwepompo ye-Rexroth A4VG125 piston
Izingxenye ezisele ze-A2FE160 180 piston pump Big Bearing T7FC070
Izingxenye ezisele ze-A2FE160 180 piston pump Big Bearing T7FC070, Elephant Fluid Power inikeza ama-hydraulic piston pump bearings, amabombo wangempela, intengo iyaqondakala, futhi izothunyelwa zingakapheli izinsuku ezi-5.
Ingxenye ebalulekile yepompo ye-plunger iyona ethwele. Uma kwenzeka kudlalwa, ukuvunyelwa okujwayelekile kwamapheya amathathu wokushayisana ngaphakathi kwepompo wokubacindezela akunakuqinisekiswa. Ngasikhathi sinye, ukushuba kwefilimu kawoyela ethwala i-hydrostatic yombhangqwana ngamunye wokungqubuzana kuzokonakala, kunciphise ukusetshenziswa kwepompo ye-plunger. impilo. Ngokwemininingwane enikezwe ngumkhiqizi wepompo wokubacindezela, impilo esezingeni eliphakathi nendawo yokusebenza ingu-10000h, futhi kuyadingeka ukuthi kushintshwe ichweba elisha uma leli nani lidluliwe. Amabhere asusiwe awatholakali ngaphandle kwemishini yokuhlola yobungcweti, futhi angahlolwa ngokubukeka kuphela. Uma ukuklwebheka noma ukuguqulwa kombala kutholakala kubuso be-roller, kufanele kufakwe okunye.
Lapho kushintshwa amabhere, kufanele kunakwe ezinhlamvwini zesiNgisi namamodeli wamabhere wangempela. Iningi lamabombo wempompo ye-plunger asebenzisa amabombo amakhulu wokulayisha umthwalo. Thenga umkhiqizi wangempela nemininingwane yoqobo. Uma ushintsha omunye umkhiqizo, kufanele uthintane nomuntu onolwazi ngokuthwala ukuze abheke phezulu etafuleni bese eshintshana, inhloso ukugcina izinga lokunemba nomthamo wokuthwala.
Amaphampu we-Axial plunger angasebenzisa futhi ama-frequency converters ukonga amandla kagesi. Enqubeni yangempela yokukhiqiza, amaphampu we-axial plunger avame ukusebenza ngaphansi kwengcindezi noma ukugeleza ukulungisa isimo sokusebenza. Lapho ingcindezi yangempela ingaphezu kwengcindezi edingekayo, iyalungiswa nge-valve yokusiza ukugcina ingcindezi yayo yokusebenza izinzile futhi ivumele i-valve yokusiza ikhulule okweqile. Imoto ibigijima ngejubane eligcwele kaninginingi, futhi ukusetshenziswa kwamandla kuhlala kungashintshi.
Ipuleti le-valve linezinhlobo ezimbili: ukusatshalaliswa kokugeleza kwendiza nokusatshalaliswa kokujikeleza okuyindilinga. Ukusatshalaliswa kokugeleza okuyindilinga kulungiswa ngokugaya lapho ukuklwebheka ebusweni bokugeleza kwesilinda kungashisi kakhulu: lapho umsele osemgodini wokusabalalisa ukugeleza kwesilinda ujulile, inkatho kufanele igcwaliswe "ngobuchwepheshe bobunjiniyela bendawo "ngaphambi kokugaya Musa ukugaya ungaboni ukuvimbela ungqimba lwethusi ekuncipheni noma ekuvuza kwamafutha kusisekelo sensimbi.
Lapho usebenzisa ukuchichima ukulungisa ingcindezi nokugeleza, okunye okweqile kuphuphuma kubuyele ohlelweni lokuqala, okuholela emandleni angenamsebenzi wepompo yeplunger nokusebenza kahle okuphansi. Uma kusetshenziswa i-inverter yokonga amandla ka-Chuangjie, i-valve echichimayo ingasethwa ivaliwe, ngokusebenzisa i-inverter yokonga amandla ngokwayo ilungisa ngokuzenzakalela ingcindezi yokusebenza ukugcina ukuzinza kwengcindezi yokusebenza, bese ilandelela ingcindezi yedivayisi ngokuzenzekelayo. Qaphela ukulawula okuzenzakalelayo, ngaleyo ndlela kulondolozwe ukusetshenziswa kwamandla. Inzuzo enkulu yale ndlela yokulungisa ukuthi inganciphisa ukusetshenziswa kwamandla okusetshenziswa kwepompo ye-axial piston, futhi umphumela wokonga amandla ungafinyelela ngaphezu kuka-30%.
Sawubona, Indlovu Fluid Power iyiqembu elisezingeni eliphakeme lokuthuthukisa elinamandla amakhulu wobuchwepheshe, elihlinzeka ngemikhiqizo esezingeni eliphakeme, izixazululo eziphelele nezinkampani ezihlinzeka ngosizo lokuqala kubasebenzisi. Inkampani inamathela kwisisekelo sokusungula ibhizinisi ngobuqotho, ukugcina ibhizinisi ngekhwalithi, nokwenza inqubekela phambili ngentuthuko. Iyaqhubeka nokukhuphuka iziqongo ezintsha ngejubane eliqinile futhi ineqhaza embonini kazwelonke ezisebenzelayo. Yamukela amakhasimende amasha namadala ukuthi athenge imikhiqizo yawo ayithandayo ngokuzethemba. Sizokusebenzela ngenhliziyo yonke!
Olandelayo: F-201346 ukuthwala okukhulu kwepompo ye-Rexroth A4VG125 piston
F-201346 ukuthwala okukhulu kweRexroth A4VG125 piston ...